अलैँचीको भाउ दशकयताकै कम, किन घट्यो यसरी एक्कासी ? आश्चयर्मा किसान – Etajakhabar
अलैँचीको भाउ दशकयताकै कम, किन घट्यो यसरी एक्कासी ? आश्चयर्मा किसान
तेह्रथुम : म्याङलुङ्गका अलैँची व्यापारी तुलसी ढकालले पाँच मन अलैँची प्रतिमन (४० किलो) रु २५ हजारको दरले खरिद गर्नुभयो । अलैँची व्यवसायी सङ्घ तेह्रथुमका महासचिवसमेत रहनुभएका ढकालले मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि १० वर्षयताकै सस्तो मूल्यमा अलैँची खरिद गर्नुभएको हो ।
व्यवसायी ढकाल भन्नुहुन्छ, “अलैँचीको भाउ झन् ओरालो लाग्दैछ, सुधार आउने कुनै छाँट–काँट छैन, नियमित ग्राहक भएकाले नयाँ उत्पादनको पाँच मन अलैँची यस वर्ष पहिलो पटक मैले खरिद गरेँ ।”
“बजारको मागभन्दा उत्पादन बढी भएकाले अलैँचीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको हो”, अलैँची व्यवसायी महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक नेपालले भन्नुभयो । पुर्वका पहाडी जिल्ला तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभासहित देशका ४० जिल्लामा अलैँची उत्पादन हुन्छ । यी जिल्लाबाट वार्षिक पाँच हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी अलैँची विदेश निर्यात हुन्छ ।
आव २०७३÷७४ मा जिल्लाबाट रु ३१ करोड ३७ लाख बराबरको २५० मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रोहिणीराज घिमिरेले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक ०८, २०७४ समय: १५:५२:१७